ကျန်းမာဝဖြိုး အလှတိုး Diet or Exercise | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ကျန်းမာဝဖြိုး အလှတိုး Diet or Exercise
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 20, 2013 in Health & Fitness | 14 comments
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကမ္ဘာဂျီးမှာ လူတိုင်းဟာ ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၊ အစားအသောက် မှန်မှန်စား ရှိကြပါမယ်။ သို့ပေသိ အဲလို အမြဲတစေ မဖြစ်တာမို့ ကျွမ်းကျင်သူ ဆြာသမားများထံ ချဉ်းကပ်ပြီး အစားရှောင်ခြင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ဘယ်ဒင်းက ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျဖို့၊ ရောဂါမဖြစ်ဖို့နဲ့ ယေဘူယျ ကိုယ်ခံစွမ်းအား မြှင့်တင်ဖို့ ပိုတာသွားသလဲဆိုဒါ မေးခဲ့ပါဒယ်။ အနိုင်ရသူကို ကဏ္ဍတခုစီအလိုက် သရဖူဆောင်းပေးထားတာ ဟောဒီလိုပါ…
ဝိတ်ကျနိပ်ဟ – အနိုင်ရသူ အစားရှောင် မသနားပေါင်
အင်္ဂျာီဆိုက်သေးဝတ်နိုင်ဖို့ အစားအသောက်ကနေ ကယ်လိုရီ လျှော့ချတာ တိုက်ရိုက်နည်းလမ်း အကျဆုံးလို့ သုတေသန ပြုချက်များမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုတယ်။ အဲလိုလုပ်တာ လေ့ကျင့်ခန်း တနာရီလုပ်ပြီး နေ့တိုင်း ကယ်လိုရီငါးရာ ကုန်ဖို့ ကြိုးစားတာထက် အပုံကြီး လွယ်ကူပါသတဲ့။ ဒါပေမဲ့ဗျာ အစား၊ လေ့ကျင့်ခန်း နှစ်ခုစလုံး ဝိတ်ကျဖို့ မရှိမဖြစ် လိုမှာပါ..။
အားတင်းဝါးရင်း – အနိုင်ရသူ တက်ကြွတဲ့ ကြက်ဖ
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ ဥနှောက်ကနေ dopamine၊ norepinephrine လို အာရုံကြော လှုံဆော်စေတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းများ ထွက်လာစေတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း စွဲစွဲမြဲမြဲ ပြုလုပ်သူများမှာ ကိုယ်ခံစွမ်းအား မြင့်တက်လာကြောင်း စစ်တမ်းသုတေသန ၇၀ကျော် ရှိထားပါတယ်။
နှလုံးသား လဖုန်းစား – အနိုင်ရသူ အစားရှောင် မသနားပေါင်
နှလုံးရောဂါ ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အားဖြည့်ဓာတ်ကူတခု ဂရုစိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲဒါဟာ အိုမီဂါ-၃ ဖက်တီးအက်ဆစ် ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသန ပြုချက်များအရ ငါးကြီးဆီကရတဲ့ အိုမီဂါ-၃ ဒြပ်ပေါင်းသည် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွားနှုန်း ၆၄%အထိ လျှော့ကျစေတယ်။ သို့သော်ငြား လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့် နှလုံးသွေးညှစ်မှု cardiovascular system (ရမ်းဖြီးလိုက်တာ) အားကောင်းစေတာတော့ မမေ့ပါနဲ့။
သွေးတိုးကြေးအိုး – အနိုင်ရသူ တက်ကြွတဲ့ ကြက်ဖ
အမေရိကန်အမျိုးသမီး ဆယ်သန်းလောက်မှာ သွေးတိုးရောဂါ ရှိပါတယ်။ အစားရှောင်ခြင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ကနေရတဲ့ သင့်တော်ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ရောဂါကာကွယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ နဲနဲပိုသာတယ်။ လှုပ်ရှားနေတဲ့ကြွက်သားတွေက သွေးထဲကနေ ဂလူးကို့စ် ညှစ်ထုတ်ရင်း သွေးထဲက သကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ လောင်စာစွမ်းအင် ဖြစ်စေတယ်။
ကင်ဆာလင်ရှာ – အနိုင်ရသူ မချိမချိ.. သရေပွဲဖြစ်၏
အပင်အရွက်အားပြု အစားအသောက်နဲ့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းတို့ဟာ ကင်ဆာရောဂါ တာဆီးပေးရာမှာ အကောင်းဆုံးပဲ..။ သတိပြုဖို့က စွဲစွဲမြဲမြဲ လေ့ကျင်ခန်း ပြုလေ ရောဂါကာကွယ်နိုင်လေ ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးအားပြေးထား – အနိုင်ရသူ တက်ကြွတဲ့ ကြက်ဖ
မိနှစ်၂၀ ချွေးထုတ်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့တင် လူတယောက်အဖို့ ၁၂နာရီ တက်ကြွရှင်သန် နေစေနိုင်တယ်။ စိတ်ကျရောဂါ ခံစားနေသူများအတွက်လည်း ထိရောက်တဲ့ ကုသခြင်းမည်တယ်။ ပြီးတော့ ဦးနှောက်ထဲမယ် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေလို့ စိတ်ဖိစီးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အသုံးဝင်ပါ၏။
Inaperfect world, everyone would work out enough and eat right all the time. But that’s not always possible, so we turned to the experts to find out what really matters most–dieting or exercise–for losing weight, fighting disease, and boosting overall well-being. Here, we crown the champ in each category.
how far you’d have to walk
Hamburger (no cheese) = 2.5 miles
French Fries (Large )=5miles
Crispy Chicken Sandwich = 6.5 miles
ဒီလ Shop Smart report ထဲပါလာတယ်..
လမ်းလျှောက်တာနဲ့နှိုင်းတာက.. စားလိုက်လို့တက်သွားတဲ့.. ကယ်လိုရီကို ပြန်လောင်ကျွမ်းစေဖို့.. လျှောက်ရမယ့်မိုင်ပါ..။
ဆိုတော့… မက္ခဒါနယ်သွားစားရင်.. ကြက်ဆင်းဒ၀ရ်ှအစား.. အမဲသားဘာဂါစားကြပေတော့…
ကုထုံး နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံး
ဒမာ ဂျော့ဂင်း ကိစ္စ စိတ်နာစရာ ရှိပါတယ်ဆိုမှ
ဘာ လေ့ကျင့်ခန်းမှလည်း လုပ်ဘူး::
ဘာဖြစ်ဖြစ် ချစ်မယ်ဆိုလား:: ဘာလား::::
ဟိုစကားလုံးလေး တော့ ရင် ထဲ ရောက်လာတယ်ဘာဒဲ့
သွေးနဲနဲတိုးတတ်ပေမင့် လေ့ကျင့်ခန်းလဲ မလုပ်ချင်…
အစားတော့လဲ နဲနဲစားတာဘဲလေ ရလောက်ပါတယ်…
ဆိုပြီးတော့ မလျှော့ …အဲဒါနဲ့ဘဲ….
ကိုယ်တိုင်တော့လုပ်နိုင်ဘူးရယ်။ တူညားလုပ်နေဒါဒေါ့ကြည့်တွားပီး အားကျတွားဘာဒယ်။ ဥဥကြောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့အိုက်လိုကိုယ်လုံးဖစ်တွားဒါလားဟင်။
အပျူထင်းတာလေး လျှော့ပီး လေ့ကျင့်ခန်းပြန်လုပ် အူးမှ….ေိေိ
လူတိုင်းကြိုက်စေမယ့် (ကိုယ်နဲ့ နှိုင်းပြီး ) အစားလည်း မလျှော့၊ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း မလုပ်ပဲ အ၀လွန်ရောဂါနဲ့ ဆီးချိုရောဂါကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးနဲ့ ကုသပျောက်ကင်းနိုင်မယ့် ကုထုံးသစ်တစ်ခု စမ်းသပ်တွေ့ရှိနေပြီတဲ့။
BBC News မှ “Weight Loss Gut Bacterium Fuond” ဆိုတဲ့ ဆေးပညာဆောင်းပါးကို အောင် (ဆေး-၁) က ဘာသာပြန်ထားတာ ဂျာနယ်တစ်ခုမှာ တွေ့မိလို့။
လောလောဆယ်မတော့ ရွာထဲ ဝင်ပြီး ပြန်မထွက်နိုင်လို့
အညောင်း က မိ၊
ဗိုက်ဆာ နေတာတောင် ထပြီးအစာယူ မစားနိုင်။
နေရာချင်း သာလဲလိုက်ချင် တယ်
စားလိုက်တာမှ မတရားးးး မဝနိုင် ဝူးးးးဖြစ်နေတယ်
ခြေထောက်ဂျီး တစ်ချောင်း မိုးဘော်ထောင်လို့ ….
ဦးကြောင် ယောင်မှားဒါ ခွေးလွှတ်နိုင်ဘာဒယ် …
ကျုပ်တောင် ဂလု … ဂလု …